Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Horohoron-tany mahery vaika no manakorontana ny Saikinosin'i Alaska
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Horohoron-tany mahery vaika no manakorontana an'i Alaska
Ny saikinosy dia faritra mafana amin'ny seismika, ary eo ambonin'ny tendron'ny fihaonan'ny takelaka tektonika Amerika Avaratra sy Amerika Avaratra.
Horohoron-tany mahery no namely ny saikinosy Alaska.
Horohoron-tany mihozongozona ny fonenan'i Perryville.
Tsy nisy maty, naratra na simba voalaza.
Ny US Geological Survey (USGS) dia nitatitra fa nisy horohoron-tany 6.9 tamin'ny tanjaka mahery vaika namely ny saikinosy Alaska tamin'ny sabotsy maraina.
The USGS nanome naoty 6.9 tamin'ny maridrefy ny horohorontany, naoty iray voasokajy ho "matanjaka" ary ampaham-teboka iray ambanin'ny "lehibe".
Ilay horohoron-tany, izay mety hamongotra faritra namboarina, dia nampihozongozona ny fonenan'i Perryville, ao anatin'ny faritra feno hetsi-panoherana.
Ny horohoron-tany dia nanakaiky ny morontsirak'i Saikinosy Alaska, lalan-kely manify amin'ny tany sy nosy izay mivoaka avy amin'ny morontsirak'i Alaskan ary mankany amin'ny Oseana Pasifika mankany Russia. Somary vitsy mponina ny saikinosy, ary ny tanàna akaiky indrindra ny ivon'ilay horohoron-tany dia Perryville, toerana misy olona manodidina ny 100, eo amin'ny 85 kilometatra avaratra andrefany.
Ny saikinosy dia faritra mafana amin'ny seismika, ary eo ambonin'ny tendron'ny fihaonan'ny takelaka tektonika Amerika Avaratra sy Amerika Avaratra. Izy io dia tranon'ny volkano mavitrika marobe, ary matetika dia mahita horohoron-tany lehibe. Tamin'ny faramparan'ny volana lasa teo dia nisy horohoron-tany 8.2 tamin'ny tanjaky ny tany nahatratra ny toerana iray ihany izay voadona tamin'ny fangovitana ny sabotsy, ary narahin'ny horohoron-tany telo 5.9, 6.1 ary 6.9 ny haavony. Ity horohoron-tany ity no lehibe indrindra namely an'i Etazonia hatramin'ny 1965, ary ny lehibe indrindra tamin'ny tantaran'izao tontolo izao hatramin'ny taona 2018. Na izany aza, tsy nisy ny aina nafoy.
Oktobra 22, 2021 ao amin'ny 09: 37
Misaotra anao amin'ny lahatsoratra tena tsara. Manantena aho fa hanohy amin'ny lohahevitra toy izany ianao. Mirary fahombiazana ho anao aho. Misaotra anao
[url=https://chat4u1.com/] دردشة عراقية[/url]
[url=https://npchse.net/” ]Fampahalalana an-tserasera [/url]
[url = https: //iraqeachat.com/ ”] شا /ا / /
[url = https: //iraqeachat.com/ ”] شا
[url = https: //p3dcoin.com/ ”] شا / / / /
[url=https://iraqeachat.com/” ] عراقنا شات[/url]
[url=https://chat4u1.com/] عراقي شات[/url]
[url = https: //chat4u1.com/ ”] شا [ذ
[url=https://chat4u1.com/” ]Fampahalalana momba ny عراقنا[/url]
[url=https://bnotah.com/” ]Shaaت بنوتة قلبي[/url]
[url=https://www.iiraqia.com/” ]Fampahalalana momba ny fahasalamana[/url]
[url=https://www.iiraqia.com/” ]Fampahalalana an-tserasera [/url]
[url = https: //sh-irq.online/ ”] شا /
[url=https://chat4u1.com/” ] عراقنا شات [/url]
[url = https: //chat4u1.com/] شا / / /ر [/ / / /
[url=https://chat4u1.com/] دردشة صوتية[/url]
[url = https: //www.cinequo.com/] Mpanaraka [/ url]
[url = https: //menb3.net/] شا /ج / /
[url=https://bnotah.com/] شات بغداد[/url]